Maxaan ku samayn karaa fiidiyoow ku jira Sawirro Mac ah? | Waxaan ka socdaa mac
Javier Porcar | | OS X El Capitan, Barnaamijyada Mac, Tababarada
Codsiyada hooyo ee Mac-da ayaa noo oggolaanaya inaan ku qabanno howlo badan oo kala duwan faylalkayaga, isagoo iftiiminaya fududaan iyo tafatir deg deg ah oo fudud fayl, sawir ama fiidiyow, oo ay suurtagal tahay in lagu dhammaystiro shaqada barnaamij gaar ah haddii loo baahdo.
Codsiga Sawirradu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad keydiso sawirrada iyo fiidiyowyada abuurista albumsyada, la jaanqaadidda iCloud iyo daabacaad yar oo iyaga ka mid ah. Marka laga hadlayo fiidiyowyada, noo oggolaan mayno oo keliya inaan aragno, laakiin sidoo kale inaan sameyno hagaajinta soo socota. Fur Sawirro waana aragnaa.
Gaabin muddadeeda: adigoo gujinaya fiidiyowga, barta 'Play', muddada fiidiyaha, iwm. la mid ah baarka aan ka naqaano QuickTime. Qaybta midig ee sare ee baarkan, waxaad ka heli doontaa Astaanta qalabka saacadda. Adiga oo riixaya, fursado kala duwan ayaa u muuqda. Midka koowaad waa Gaabin. Adoo dooranaya xulashadan, baarka cirro wuxuu noqonayaa nooc cajalad muuqaal ah oo lagu xardhay xariiq huruud ah. Dhamaadka midig iyo bidix ayaa ka sii dhumuc weyn oo midkood gujinaya oo jiidaya, waan yareyn karnaa ama dheereyn karnaa fiidiyaha sida aan u jecelahay marwalbana waan arki doonaa barta aan ku suganahay isla shaashadda. Marka ay waafaqdo rabitaankeena, waxaan gujin doonaa Gaaban fiidiyowguna wuu diyaar noqon doonaa.
Muuji badhannada horay u socodka: Waxay noo ogolaaneysaa inaan si isku mid ah u riixno badhanka hore / gadaal ee leh: qaab dhismeedka ama xawaaraha hore: x2, x5, x10, x30.
Qaabka Sawirka: Waxaa loo isticmaalaa in lagu meeleeyo daboolida fiidiyowga. Sawirada asal ahaan waxay isticmaali doonaan midka hore. Si tan loo sameeyo, waxaan fiidiyowga ku dhejin doonnaa booska saxda ah ee qaabka aan dooneyno inuu ahaado daboolka oo waxaan riixnaa ikhtiyaarka laga helo qalabka saacadda sida "Set Poster Frame" Haddaan dibedda u baxno waxaan u arki doonnaa sawirkan inuu yahay boodhadh.
Qaabka Dhoofinta sida Sawirka: Loo adeegsaday si loo helo sawir fiidiyowga ah. (Waa inaan maskaxda ku haynaa in guud ahaan fiidiyowga uu ka tayo hooseeyo sawirka sawirkaan la helayna wuxuu yeelan doonaa tayo ka sii xun). Waxaan tagnaa qolka jir, riix qalabka oo isticmaal xulashada "Dhoofinta Frame ahaan Sawir ahaan". Muhiim: Sawirkan waxaa loo dhoofin doonaa galka sawirada kumbuyuutarkeena oo looma dhoofin doono tabta sawirada ee arjiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Maxaan ku samayn karaa fiidiyoow ku jira Sawirro Mac ah?